IBuffalo City isayine isivumelwano seminyaka neChippa United - Impempe
IBuffalo City isayine isivumelwano seminyaka neChippa United
Imeya yaseBuffalo City uXola Pakati nomphathi weChippa United uSiviwe Mpengesi
Yize izinto zingahambi kahle kwiChippa United kodwa umasipala waseBuffalo City usuzibophezele ekugcineni iChilli Boys kulesiya sifundazwe ngokusayina isivumelwano seminyaka engu-20 sokuthi iChippa yakhe kabusha izinkundla iBaffalo City neJan Smuts Stadium.
NgoLwesine imeya yaseBuffalo City uXola Pakati iveze ukuthi sebesayine isivumelwano noSiviwe “Chippa” Mpengesi esizokwenza ukuthi iqembu liqhubeke nokuhlala e-Eastern Cape. IChippa akuyihambeli kahle emidlalweni yeDStv Premiership njengoba nangoLwesithathu iphinde yashaywa AmaZulu FC ngo 1-0. Nokho lokhu kubukeka kungawuxaki umasipala waseBuffalo City okubona kuyisibusiso ukuba naleli qembu elifudukele kulesi sifundazwe ngo-2016 lisuka eKapa.
“Akumele sibuke lokhu njengenkontileka kodwa sisebenza ngokubambisana neChippa United kusukela ngo-2016. Lobu budlelwano bumbandakanya ukuletha lapha ibhola lesigaba esuphezulu – imidlalo yePSL ebingekho lapha phambilini. Sinqume ukuletha iChippa lapha ukuze sibe nobudlelwano. Sinqume ukunika iChippa inkundla. Inhloso yokwenza lokhu ukuqinisekisa ukuthi iChippa iyahlala lapha, iqhubeke nokudlala ibhola esigabeni esiphezulu. Okunye ukuthi kumele baqinisekise ukuthi bakhulisa ikhono elikhona kulesi sifundazwe,” kusho uPakati.
“Ngaphezu kwalokho kukhona nokusizakala ngokwesimo somnotho ngokuba neChippa United lapha. Njengoba nazi uma iChippa idlala lapha inkundla iyagcwala phama ngoba abantu bayatheleka enkundleni. Lokhu kukhuphula idolobha ngokomnotho kuphinde kufake isandla kwezokungcebeleka ngoba abantu abasuke bezobuka umdlalo bayalala lapha. Siyazuza kakhulu ngokuletha iChippa lapha futhi abantu abakhele idolobha lethu bathola ithuba lokubuka ibhola lesigaba esiphezulu ebelingekho lapha phambilini.”
UPakati ubonge wanconcoza kuMpengesi ngokukhetha ukuhlala e-Eastern Cape ikakhulukazi njengoba bengenalo elinye iqembu elidlala esigabeni esiphezulu.
“Siyawubonga kakhulu umusa kaMpengesi ngokuthi anqume ukuza lapha azofaka imali yakhe. Ubenganquma ukuhlala ePort Elizabeth noma eKapa kodwa ukhethe ukuza lapha azofaka imali yakhe. Ngalokho sibonga kakhulu. Sisebenzisana kahle kakhulu naye selokhu afika lapha,” kusho uPakati.
Ephawula ngalesi sivumelwano uMpengesi, uthe: “Into engifuna ukuyenza ukuqinisekisa ukuthi yonke into iqondile enkundleni nokuqinisekisa ezokuphepha njengoba kwakunjalo phambilini. Sesivele siqashe imenenja ebisebenza eFNB Stadium. Izoqikilela ukuthi konke kuhamba kahle enkundleni zonke izinsuku. Inhloso yethu enkulu ukuba nenkulisa lapha. Sizocela imvume kumasipala ukwakha isikole lapha ukuze sicathulise izingane kuzo zonke ezemidlalo eminyakeni esukela kweyisishiyagalolunye. Sinalo uhlelo kodwa sizoba naso isithangami lapho sizokwethula lonke uhlelo lwethu mayelana nenkundla. Okwanamuhla bekuwukuthi sithole isikhiye nemvume yokusebenzisa inkundla.”
Previous Previous post: Imidlalo yabesifazane iyothuthukiswa yibona uqobo – kumele babhukule
Next Next post: Akakucabangi ukubuyela eringini uMwelase, uthi engamane asize ukukhulisa ama-amesha